Praiministra Portiogey Mitsidika an’i Angola, Voakiana Mafy Anaty Tambajotra Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Colette Alves
Voadika ny 07 Oktobra 2018 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English, русский, Italiano, Português
António Costa miresaka amin'ny minisitra misahana ny fifandraisana ivelany ao Angola | pikantsary (Youtube), nataon'ny mpanoratra
Tamin'ny 17 Septambra lasa teo no nanombohan'ny zavatra rehetra, fony nigadona tao Luanda, renivohitra angoley ilay mpitarika avy any Portiogaly, António Costa, mba hanao fitsidihana ara-panjakana, nanao pataloha jeans, nitafy lobaka tsy nisy fehintenda ary nikiraro tsy mihaitraitra.
Mifanohitra amin'ilay fomba fitafin'i António Costa, ny minisitry ny raharaha ivelany, Manuel Augusto, izay nandray ny lehiben'ny governemanta portiogey kosa nitafy palitao sy nanao fehintenda, toy ny hita ao anatin'ny bitsika iray nalefan'ny minisitra portiogey.
Tsara ny manamarika etoana fa tamin'ity taona ity ihany koa, António Costa dia nitsidika tao Mozambika ary, tamin'ny fahatongavany tao amin'ilay firenena, dia tao amin'ny seranampiaramanidina izy no nanaovana lanonana ofisialy nandraisana azy, saingy tamin'io indray mandeha io dia ny fitafiny mahazatra no nanaovany, izany hoe, ny costume (pataloha mihaja, lobaka, fehintenda ary kiraro mihaja).
Kanefa, fantatra fa nandritra ireo andro roa nitsidihany tao Angola, namonjy ny fihaonana ofisialy niarahany tamin'ny filoha Angoley, João Lourenço, i Costa ary nanatrika ny fanaovana sonia ireo fifanarahana fiarahamiasa isankarazany, nanao akanjo mihaja sy fehintenda.
Angola sy Paortigaly : firenena roa sarahan'ny rafitra fitsaràna
Taorian'ny volana maro nisian'ny fifanenjanana diplaomatika teo amin'ny firenena roa tonta, tonga tao Angola i António Costa, fifanenjanana izay nahatonga ireo Angoley sy Portiogey marobe hanaraka akaiky ny fitsidihany. Ho an'ny Praiminisitra portiogey, natao ity fitsidihana ity ho fampifanantonana indray ny firenena roa tonta.
Nisedra ny ratsy indrindra teo amin'ny tantarany ny fifandraisan'i Angola sy Portiogaly, noho ilay raharaham-pitsaràna naha-voarohirohy ilay filoha lefitra teo aloha tao Angola, Manuel Vicente, tao anatin'ilay raharaham-pitsaràna nantsoina hoe « Opération Fizz », nosokafan'i Portiogaly ary nafindra tsy ela akory izao ho ao Luanda, taorian'ny fangatahana sy fisisihan'ny governemanta angoley.
Tsy niraisan'ny rehetra hevitra ny famindràna ny raharaham-pitsarana ho ao Angola, toy ilay solombavambahoaka eoropeana Ana Gomes izay mihevitra ity fihetsika ity ho toy ny « fialàna andraikitra mahatsiravina » nataon'ny fitsaràna portiogey, mifototra aminà tohankevitra feno fihatsarambelatsihy.
Ao anatin'ity raharaha ity, ampangaina i Manuel Vicente ho nanao kolikoly tamin'ilay mpampanoa lalàna portiogey Orlando Figueira, nanome vola 760 000 euros mba hampirimana ireo fanadihadiana roa, izay ny iray, ny raharaha Portmill, dia mifamatotra amin'ny fahazoana tranobe iray raitra ao Estoril.
Mizarazara ny ety an-tserasera momba ilay fitafin'i António Costa
Mizarazara ny hevitr'ireo sasany mpampiasa aterineto momba ny fandikàna azo omena ny fihetsik'ilay mpitarika portiogey. Toy izao araka izany ny an'ilay mpanao gazetin'ny Folha 8 sy mpikatroka sivily Pedrowsk Teca, izay nanontany tena tao amin'ny kaontiny Facebook momba ny fihetsiky ny praiminisitra portiogey :
Mitafy jean mandritra ny fitsidihana ofisialy izay efa ela no niandrasana azy, hafatra toy inona no tian'i Portiogaly ho ampitaina amin'i Angola?
Ho setrin'izany, Ilídio Manuel, mpanao gazety ihany koa ary matihanina amin'ny filalaovana an-tsehatra, dia manontany tena amin'izay mety ho mitranga raha fihetsika toy izany no ataon'ny mpitarika iray avy ao Angola na avy aminà firenena iray hafa :
Tonga ao Luanda hanao fitsidihana OFISIALY ny praiminisitra portiogey, António Costa, manao fiakanjo tsy miasa saina (jean tsy manao fehintenda). Mety ho sahy nitafy tahaka izao ve izy raha nitsidika tany Alemaina , Etazonia, Japana na firenana iray hafa mitàna lohalaharana? Ary raha ny mifanohitra tamin'izay no nitranga, mpitarika iray avy ao Angola manao fitsidihana an'i Portiogaly no mitafy tahaka izao ?
Kanefa, raha ny sasany mitsikera ny fomba fitafiny, ny hafa nisafidy ny hidera ny fihetsiky ny praiministra portiogey nandray ny orinasa fitaterana an'habakabaka portiogey (TAP) hanaovany ilay fitsidihana ara-panjakana:
António Costa, nanao fitsidihana ara-panjakana teto amin'ny firenentsika ny « Praminisitra » avy ao Portiogaly, nandritra ny andro roa (tonga ny 17 ary lasa ny 18), fotoana nihaonany tamin'ny filoha João Lourenço, nanao ny sidiny Lisbonne – Luanda – Lisbonne niaraka tamin'ny delegasiona notarihany tao anatin'ny sidina ara-barotra an'ny orinasa fitaterana an'habakabaka portiogey (TAP Portugal), midika izany fa tsy nampiasa fiaramanidina azy manokana izy ary azo heverina hoe nisafidy ny kilasy voalohany na ny an'ireo mpandraharaha aza (izay ara-dalàna tsara raha ny zavanisy teto no jerena).
Amin'ny Novambra ho avy izao ny filoha João Lourenço dia hanao fitsidihana ara-panjakana any Portiogaly, ho roa andro ihany koa, tiako ho hita raha toa ny filohantsika sy ny delgasiona tarihany ka mba handray ny zotram-piaramanidina nasionaly (TAAG – Angola Airlines) amin'ny sidiny Luanda – Lisbonne –Luanda, na hisidina amin'ny fiaramanidina manokana.
Ho ankafizina fatratra izay tabilao izay…Aoka hilamìna !
Maria Antónia Palla, renin'ny praiminisitra portiogey, dia nihetsika hiaro ny zanany manoloana ireo onjam-panehoankevitra maro sy fanakianana avy any Luanda :
Tsara taiza ny zanako lahy, António Costa. Ao Angola, misy tafahoatra ny arofenitra ary misy zavatra tsy dia manandanja loatra, toy ny demaokrasia.
Ilay Mozambikana mpisera aterineto, Constatino Marengula, milaza ho tsy mahatakatra hoe karazana hafatra tahaka ny inona no tiana hiampita amin'ny fanaovana palitao sy fehintenda :
Misy olona tezitra noho i António Costa tonga tao Angola tsy nanao palitao sy fehintenda. Zavatra tsy mba haiko hatrizay ny resaka fomba fitafy manaraka vanimpotoana, ny fandraisana andraikitra sy ny maha-matihanina ampifanarahana amin'ny endrika ivelany, asehon'ny palitao sy ny fehintenda, any amin'ny faritra tropikaly, mafana sy mando. Rehefa mahita izany aho, dia mahatsiaro ny dinidinika iray ho fandraisana hiasa, teny anivon'ny banky iray niroborobo fatratra tany amin'ny taona 90 tany. Na amin'ny andro midanika be aza, nanontaniana aho raha olana ho ahy ny mitafy palitao sy manao fehintenda… ! Nambarako azy ireo fa tsia ary nanamarina ny tenako aho ! Tsy haiko na noho izay fa tsy isan'ireo voafidy aho! Taorian'ny nahitako mpisoloky marobe manao fehintenda, tena liana hatrany aho ny hahafantatra izay zavatra katsahina amin'ireny palitao sy fehintenda ireny, miaraka amin'ny hafanàna sy ny hamandoana !
4 andro izayFahasalamàna